Domperidone duritaanka - Shiinaha Ningbo Hormone Labaad
Buugga Operation of duritaanka Domperidone Veterinary 【Name of Veterinary Drug】 【Common Name】: irbado Domperidone 【Ingiriisi Name】: irbado Domperidone 【Name ee Pinyin】: Duopanlitong Zhusheye 【Major koobnaan cunto】: Domperidone 【Description】: soo saarka Tani waa dareere cad Biyuhu 【Action pharmacological】: waa antagonist receptor dopamine ah; Domperidone joojin kartaa dopamine ka reebaaya kalluunka ee sii daayo of GTH iyo ugxan iyo sidoo kale la xoojiyo LHRH-A2 iyo sGnRH-A si ay u abaari GT ...
Buugga Operation of duritaanka Domperidone
【Ingiriisi Name】: irbado Domperidone
【Name ee Pinyin】: Duopanlitong Zhusheye
【Major koobnaan cunto】: Domperidone
【Description】: soo saarka Tani waa dareere cad Biyuhu
【Action pharmacological】: Waa antagonist receptor dopamine ah; Domperidone joojin kartaa dopamine ka reebaaya kalluunka ee sii daayo of GTH iyo ugxan iyo sidoo kale la xoojiyo LHRH-A 2 iyo sGnRH-A si ay u abaari GTH sii daayo iyo ugxan.
【Tilmaamayaasha】: Waa in la si wadajir ah loo isticmaali karaa LHRH-A 2 for induction macmal ah empathema iyo ugxan kalluun
【Isticmaalka iyo Qiyaasta】: First, milo alaabta this leh qadar ku haboon oo biyaha cusbada caadiga ah ilaa mililitir kasta oo biyo ah ka kooban 5 ~ domperidone 10mg. Marka labaad, qas LHRH-A 2 la isku duro iyada oo qaar ka mid ah biyaha cusbada caadiga ah si aad u hesho LHRH-A a 2 xal la uruuray of 5 ~ 20μg / ml. Dheellitir qiyaasta loo baahan yahay iyo qas ku xusan laba xal. Markaas, codsan ey isku duro intraperitoneal (saldhig of fin pectoral) ama duridda (meel u dhow saldhigga ah ee fin dhabbar). Qiyaasta kalluunka dumar ah halkii kiilo waa sida soo socota:
kalluun, kalluun crucian kalluun cawska Kuub, bighead dace bream fuscus clarias loach megalobrama amblycephala ilishaeformis Erythroculter
Kalluun Black u baahan yahay laba irbado. Qiyaasta la isku duro koowaad: Dom 5mg + LHRH-A 2 5μg; duray labaad waxaa la siiyaa 24 ~ 48 saacadood ka dib la qiyaasta ah 5mg Dom + LHRH-A 2 10μg.
kalluunka waalidka Lab kaliya u baahan 1/2 of qiyaasta kalluunka waalidka dumar ah ee kor ku xusan
【Reaction Drug Dacdarrada】 No reaction daroogada loo kasin waxaa laga helaa haddii qiyaasta lagula taliyey waxaa la socda.
【Matters Baahan Feejignaan】:
1. kalluunka Waalidka isticmaalka sheyga kanna waa xaaraan in la cuno by dadka
2. Waxaa loo hubiyo karaan waxtarka fiican heerkulka biyaha of 20 ~ 30 ℃ ah. Haddii heerkulka biyaha waa ka hooseeyaa 20 ℃, natiijooyinka induction arkaayo lagu wax yar ka saameyn doonto.
3. qiyaasta xad-dhaafka ah sare waxay keeni kartaa in ugxantu hore oo saameyn ku yeelan doonin Heerka dhalmada ay.
4. Waxa fiican si ay u diyaariyaan daroogada ka hor inta la isticmaalayo. Daawada diyaar waa in lagu duraa 0.5-1 saac gudahood.
【Faahfaahinta】: 2ml: 100mg
【Xidhmada】: 10pcs halkii xirmo
Previous: Xarunta S-GnRHa Waayo, duritaanka (Ovuhom)
Next: LHRH-A2 Durayo isticmaalka Fish
kalluun iyo beeraha □ hormoonnada Waayo Fish Taranka Ovaprim, Hagaajinta arkaayo Ovaprim